Locko Gracious: Kisah Maleficent dalam bahasa Somalia
Sheekadu waxay bilaabatay iyadoo sheeko ah naag jir. cirfiid dhallinyaro ah oo la odhan jiray Maleficent ku nool xoog ku Moors ah, oo xuduud la boqortooyada faerie of nin. Sida gabar dhalinyaro ah, ayay jacayl isku dhaceen wiil aadanaha, wiil beer, magacaabay Stefan waa kan waalan oo ku saabsan Maleficent iyo hami weyn inuu boqor noqdo. Waxay la kulmeen markii Stefan dunida u yimid inuu wax xado Moors. Ugu dambayntii, ay u noqdaan kuwo saaxiibo, Stefan dhunkashada Maleficent (Isobelle Molloy) iyo waxa wac dhunkasho Love True. Kor buu iyo Stefan wada koray ilaa maalin maalmaha ka mid Stefan mar dambe yimaadaan si ay isaga u arkaan. Stefan dadka waaweyn (Sharlto Coopley) doonayo in ay gaaraan riyada ee ku nool daartii uu. Dhanka kale, dadka waaweyn cirfiid Maleficent noqdo xooga badan, Oo baalashiisa u koraan ballaaran ka badan Jinku kale in uu ixtiraamo Moors dunida.
Maleficent adkaaday ciidamada ee King Henry (Kenneth Cranham) in dagaalka ah oo boqortooyada dadka weeraray Moors ah. King of xanuun iyo qof kasta oo u gaysan karto Maleficent bixiyeen taajkiisiina. Stefan baxay oo habeen iyo mukhaadaraad laakiin ma dili karin isaga. Ugu dambeyntii, Stefan gubanaya baal Maleficent adigoo isticmaalaya birta (walxaha dila cirfiid) iyo ku ridi doonaa boqorka caddeyn dilka.
Maleficent qaracan badan ku khiyaanay iyo khasaaro baalashaada. Waxa uu si boqortooyada Mugdiyo boqortooyadiisii ​​cirfiid dhisa bilaabay. Ayuu badbaadiyey Diaval (Sam Riley) Kuwii ku Dhaartay ay isaga ugu adeegaan nolosha. Diaval noqday saaxiibo iyo isku halleeya. Diaval bedeli kartaa qaabka tuke ah oo wuxuu galay aadanaha ah si ay u qabtaan hawlo la siiyo by Maleficent sharka.
Maalin maalmaha ka mid, Diaval sheeg in Stefan hadda waa boqorka baabtiisi doonaa gabadhiisa dhashay, Aurora. Si loogu gacan geliyey Stefan, Maleficent yimaado rabin oo habaaray ilmaha inkaar hurdada ah. Aurora weligiis seexan doonaa dhalashadii 16-kii ka dib markii laga wareemay iyada qalab spinner farta. Stefan qaysahada naxariista. inkaarahan oo Maleficent siiyo si ay u bixiyaan le ah si ay dhunkasho jacayl run in waxaa loogu tala galay inay ku kajamaan "dhunkasho jacayl run ah" waxaa laga yaabaa in aan ka jirin.
Stefan gubi spinneret qariyey qol xiran. Wuxuu u soo diray Aurora in ay ku noolaadaan kaynta saddex iyo Jinku (Juno Temple, Imelda Staunton, Lesley Manville) ilaa maalintii dhalashadiisa 16aad ee King Stefan dabataagan by dembi, aargoosi ka badan khayaano, kuwa xun iyo kuwa isaga ka gees ah.
Inkastoo Maleficent neceb Aurora (Elle Fanning), laakiin waxa uu qaatay daryeelka ee fog marka Jinku ee kusugan ama ku guuldareystay inuu sameeyo ay shaqo. At da'da 15 sano, ayaa la kulmay Aurora iyo Maleficent Maleficent la rumeysan yahay in hooyo diin cirfiid ku Afuufnay sanadihii la soo dhaafay ka. Aurora ku qaatay waqti badan in ka sarraysa ilaa Maleficent ogaadaan in uu bilaabay inuu jeclaan amiirad ku. Waxa uu isku dayay inuu ka saaro habaarkii hurdo, laakiin aan micne lahayn.
Marka Aurora kulmay Prince Phillip (Brenton Thwaites), waxay si wadajir ah waxaa soo jiitay in midba midka kale. Phillip ahaa ee uu jidka madaxtooyada ee King Stefan, laakiin balan qaaday inuu soo laabto ugu dhakhsaha badan si aad u aragto. On maalin ka hor sanad guurada of 16 ka, Aurora ka hadlay sida uu u jecel yahay inuu la sii joogo Maleficent boqortooyada. Si kastaba ha ahaatee, ku dartaa ha warqada sheegayaa Aurora ku saabsan habaarkii Maleficent sharka. Dareen ah murugo, Aurora u tegey inuu boqortooyo aabbihiis.
Aurora Stefan xiray qol ammaan ah ilaa ay qoraxdu dhacdo on guuradii ee Aurora. Si kastaba ha ahaatee, Aurora ka baxsaday qol xiran oo ku wareegtay geliyey xabsigii ahaa in uu haystaa oo dhan qalabka la dhigay on spinner dab. wheel fur A layaab leh u muuqataa iyo Aurora jabbed farta ku irbadda. Maleficent kuwaas oo ku guuldareystay inuu ilaaliyo Aurora, dhuumaaleysi ku soo galay madaxtooyada qalcaddii. Waxa uu rajeynayo in Phillip jebin kari lahaa habaarkii. dhunkashooyinkiisu Phillip iyo Maleficent ku guuldareystay inuu raali amiirad ku. Maleficent iyo Aurora dhunkaday wejiga toosisay sababtoo ah "jacaylka runta ah" ee Aurora Maleficent sida jacaylka hooyo in gabadheeda. Aurora xaqiijiyay inuu doonayo inuu la sii joogo Maleficent in ka sarraysa ee.
Iyada oo isku dayaya in ay ka baxsadaan, Maleficent qabtay shabagyadoodii bir ah. Maleficent ma garaaci karaan hayayna iyo Stefan xidhnaayeen iyo hubka birta ah. Iyadoo la soo dhaafay ku sixir, Maleficent beddesho galay masduulaa oo Diaval. Wuxuu U dhawaaday inuu helay dilay, laakiin Aurora Maleficent xorayn baal mar xaday aabbihiis by. Iyada oo baal, Maleficent garaacday Stefan kuwa dabadeedna wuu dhintay.
Aurora noqday boqoradda kuwaas oo u suurtagashay in ay midoobaan labada boqortooyooyinka, boqortooyada dadka, iyo Jinku meesha Phillip ayaa sidoo kale ku biiray la Aurora. markaas sheekeeye The naag jir ah ayaa ii sheegay this story, taas oo ah Aurora qaawin. Dhamaadka sheekada, Aurora sheegay in boqortooyada ha la midoobin karo by geesi ama nin xun, laakiin qof oo noqday geesiga ah waqti isku mid ah ugu xun nin-Maleficent.